Tirada dhimashada Coronavirus ee Mareykanka oo dhaaftay 100,000 – Radio Damal
Tirada dhimashada Coronavirus ee Mareykanka oo dhaaftay 100,000
Ayada oo ay ahayd wax aan lagu fikiri karin dhowr bilood un ka hor, ayaa Mareykanka waxa uu Arbacadii dhaafay tirada 100,000 oo ah dad cudurka Coronavirus ugu geeriyooday gudaha dalka.
Tirada dhimashada Mareykanka ee Coronavirus ayaa goor dambe oo Arbacadii ahayd waxay mareysay 100,396, halka in ka badan 1.7 milyan oo kiis oo cudurka ah la diiwaan-geliyey, sida ay muujisay xog uruurin ay sameysay Jaamacadda Johns Hopkins.
Tirada dhimashada ee 24-ka saac ayaa sidoo kale sare u kacday Arbacadii kadib saddex maalmood oo hoos dhac ah, waxayna ahayd 1,401.
Si kastaba, inta badan gobollada dalka Mareykanka ayaa dib u furaya maqaayadaha iyo ganacsiyada kale, ayada oo uu taas ku farxayo madaxweyne Donald Trump, kaasi oo doonaya in laga soo kabtao dhibaatada dhaqaale ee cudurka ka dhalatay xilli uu raadinayo dib u doorasho.
Caasimadda Mareykanka ee Washington ayaa laga billaabo Jimcaha fududeyn doonto xayiraadaha saaran.
Mareykanka ayaa ah dalka uu sida ugu xun u saameeyey cudurka Coronavirus, ayada oo madaxweyne Trump uu iska difaacayo eedeymo la xiriira sida uu ula tacaalay cudurka – iyo inuusan goobaha dadweynaha ku xiran maaskaraha, oo ah wax maamulkiisa dadka kula taliyo.
Madaxweynaha ayaa aragtidiisa ku wajahan tahay is-beddel deg deg ah oo dhaqaalaha uu sameeyo, isaga oo ku cadaadinaya gobollada iyo dowladaha hoose ee inay qafiifiyaan xayiraadaha.